merolagani - सेयर बजारका लगानीकर्तामा कम्पनी सम्बन्धि ज्ञानको स्तर
Aug 13, 2017 Raj Kumar Pokhrel
- राजकुमार पोखरेल
केही समय अघि काम विशेषले म एउटा सेयर दलालकोमा पुगेको थिँए । राफसाफ कक्षमा काम परेकोले कारोबार कक्षबाहिर बसेर हल्ला गरिरहेका लगानीकर्तालाई छिचोलेर म भित्र जानु पर्ने थियो । तर, कारोवार कक्षको ढोका मै रहेका तीनजना अधवैशेंको समूहले मेरो ध्यान तान्यो । ...
छड्के झोला भिरेको पहिलो व्यक्ति अनि उसको पछि पछि लागेर आएका जस्तो लाग्ने अरु दुईजना भीडबाट केही अलग थिए । सेयर किन्नकालागि त्यहाँ आएको कुरा उनीहरुको सम्वादले पनि प्रष्ट हुन्थ्यो ।
शेयर बजार तलमाथि भईरहन्छ । बजार बढ्नु र घट्नु सेयर बजारको नियम नै हो । सामान्यतय जब बजार हरियो हुन्छ, बजारमा उत्साह हुन्छ । एउटाको उत्साह, अर्कोको उत्साह हुँदै त्यो लगानीको वाताबरणमा परिवर्तन हुन्छ । यसो हुँदा भखैृरै बजार प्रवेश गरेका लगानीकर्ताले पनि दीर्घकालीन विश्लेषण नगरी विना कुनै योजना सेयरमा भएभरको लगानी खन्याउने गरेका पनि पाइएको छ ।
‘खै के किन्ने ? हिजोको दाईले भने अनुसार त इआईसी किन्यो भने मालामाल हुइन्छ रे ।’ एक जनाले सँगैको अर्को साथीसँग सहमति जनाएकाे शैलीमा भन्यो ‘ठीक भनिस,यहाँ अघि धमाधम त्यही किन्ने भनेर आका छन् । उनीहरुले भन्दा पहिले हामी किन्नु पर्छ हिँड् ।’
तीनजना सहमत भएर भित्र पट्टि कारोबार कक्षतर्फ लागे । त्यहाँ भएका अन्य लगानीकर्ताको तुलनामा मलाई उनीहरुको व्यवहारले कौतुहल बनाइरहेको थियो । आफुपनि भित्र जानु पर्ने भए पछि उनीहरुको पछि लागेँ । केहीभित्रपुगे पछि सेयर खरिदबिक्री आदेश दिने स्थानमा पुगेर हतारिँदै एक जनाले भने ‘सर हामीलाई इआईसी बैंकको सेयर किनिदिनुु्स न । राम्रो फाइदा हुन्छ भन्नु भा को छ दाईले ।’
उनले त्यसो भन्दा म पनि त्यहाँ पुगिसकेको थिए । कारोबार आदेश प्रविष्ट गर्ने कमर्चारी मुसुक्कहाँसे मात्र । ‘उ त्यो कागज भरेर हस्ताक्षर गर्नुहोस् । कतिको किन्ने हो ,चेक पनि ठीक बनाउनुस्,एक छिनमा पल्लो कोठामा लैजानु पर्छ ।’ती कर्मचारीले आदेशको शैलीमा भने ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले छ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरे पछिको पहिलो कारोबार दिन अर्थात आइतबारको दिन थियो त्यो । मैले पनि पटक पटक तीनसयदेखि चारसयप्रतिशतसम्म हकप्रद आउँछ रे भन्ने हल्ला यस अघि नै सुनेको थिएँ । केही साथीहरुले पनि भन्ने गरेका थिएकी ‘एभरेष्टले धमाका पिट्दैछ रे’ । बजारको जानकारी केही हद सम्म हुने भएकाले त्यस्ता हल्लाले आफुलाई डर लाग्थ्यो ।
‘मेरो नाम फलानो छिट्टो दुई सय कित्ता किनिदिनु पर्यो ।' खरिद आदेश फारम भरीसक्ने बित्तिकै खाली चेक अघिल्तिर तेस्र्याएर उनीहरुले आग्रह गरे । ती कर्मचारीले पनि उनीहरुको भनाई अनुसार बजारबाट ३१०० रुपैंया आसपासमा सेयर किनिदिए । म पनि आफ्नो काममा राफसाफ कक्षतिर लम्किएँ । बेलुका नेप्सेको वेबसाइटमा हेर्दा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर अन्तिम पटक २९०० को नजिक कारोबार भएको थियो ।
यो देखेर मनमा केहीप्रश्न खड्किरहे, ती व्यक्तिले एभरेष्ट बैंकको सेयर किन्न चाहेका थिए अथवा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ?वा उनलाई सेयर भनेको बैंकको मात्र हुन्छ भन्ने परेको थियो ? नत्र ‘इआईसी बैंक’ कुनकम्पनी हो, किन यसको सेयर किन्नु पर्ने ?भन्ने नजानी कसरी छ लाख बढी रकमको सेयर किन्नआए ? यो प्रश्न अहिलेसम्म पनि मेरो मनमा खड्किरहेको छ ।
पछिल्लो समय छाेटो समयमा नाफा कमाउनेहरुले नै बजारमा हल्ला चलाउने गरेका छन । जसले गर्दा नव प्रवेशी लगानीकर्ता अलमलिने गरेका छन । सेयर किन्ने अनि हल्ला फिँजाउन थाल्ने, केही नाफा आयो कि सबै सेयर बेच्ने । यस्तो हुँदा हल्लाको भरमा लगानी गर्ने सामान्य लगानीकर्ताले वेच्ने अनुकूल समय थाहा नपाउदा नोक्सान व्यहोर्ने गरेका छन् ।
- लेखक एक क्यापिटलमा कार्यरत छन् ।